7 ကွန်ပျူတာ WINDOSE ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
Windows7ကိုကွန်ပျူတာက c Remove
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအသုံးပြုသူက၎င်း၏ operating system ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်တဲ့အခါအချိန်ရှိလာပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်သူမကအဲလိုဘဲသို့မဟုတ်ပေါရာဏများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းအသစ်တခု operating system ကိုထားရန်လိုအပ်ပါတယ်မှစတင်ခဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ဟာ Windows7ကို PC များက c ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
windose 8 ဖယ်ရှားခြင်း
windose 10 Laptop ကိုဖယ်ရှားခြင်း
ဖယ်ရှားရေးတစ်ဦးအထူးသဖြင့်နည်းလမ်းများစွာရွေးချယ်ရေးသင့်ကွန်ပျူတာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောပေါ်မှာ install လုပ်ထားမည်မျှ operating system များပေါ်တွင်အဓိကအားမူတည်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌, ဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာက system install လုပ်ခြင်းသည်အဘယ်မှာရှိပုံစံတစ်ခုပေါ်က partition, သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အသငျသညျ windose လို့ခေါ်တဲ့ပြည်တွင်းရေး tool ကိုသုံးနိုငျ "System Configuration" အခြား operating system ဖယ်ရှားပစ်ရန်။ Next ကိုကျနော်တို့အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်းများနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူစနစ်သယ်ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်အတွက်စဉ်းစားပါ။
Method ကို 1: Format ကို Partition ခွဲ
ကသဲလွန်စမပါဘဲအဟောင်း operating system ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုကြောင့်ပုံစံချပေးအပိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတစ်နည်းလမ်းကောင်းလှ၏။ ဒါဟာသင် install လုပ်သည့်အခါအထဲတွင် OS အသစ်ကိုအဟောင်း bug တွေကိုပြန်မလာလိမ့်မည်ဟုသေချာ။ သင်ဤနည်းလမ်းတစ်ကြွယ်ဝတဲ့ volume ထဲမှာဖြစ်တယ်, ထိုကြောင့်သင်သည်လိုအပ်ပါကအခြားလေယာဉ်တင်သင်္ဘောမှလွှဲပြောင်းချင်သောအရေးကြီးသောဖိုင်များ, ဖကျြဆီးခံရလိမ့်မည်ဟုအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်တော်မှတ်မိနေရပေမည်။
ပုံစံအားဖြင့် windose7ဖယ်ရှားခြင်းတပ်ဆင်ခြင်း disk ကိုဒါမှမဟုတ် USB drive ကိုသုံးပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးသင်ဝန်အလိုရှိသောကိရိယာယူသွားတတ်၏နိုင်အောင် BIOS ကို configure ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့က, PC ကို reboot နှင့်ချက်ချင်း acoustic signal ကိုညှပ်ပြီးနောက်နောက်တဖန် BIOS ကိုအတွက်ခုန်ခလုတ်ကိုလှည့်။ ဒါကြောင့်မကြာခဏ (ကွန်ပျူတာများကနေကွဲပြားစေခြင်းငှါ del သို့မဟုတ် F2), သို့သော်၎င်း၏အမည်ကိုသင်တဲ့အခါမှာစနစ်ဘွတ်ဖိနပ်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
, BIOS interface ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်က Boot တက် device ကိုရွေးချယ်ရှိရာအပိုင်းပြောင်းရွှေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အများစုကတော့၎င်း၏အမည်ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဤအပိုင်းကိုနှုတ်ကပတ် "Boot ကို"ဒါပေမယ့်တခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
တပ်ဆင် disc ကိုဒါမှမဟုတ် USB flash drive ကို - သင်သုံးရန်အရာပေါ် မူတည်. Boot တက်, CD-ROM ကိုဒါမှမဟုတ် USB များ၏စာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံးအနေအထား assign ချင်သောအပိုင်းဖြစ်သည်။ လိုချင်သော setting များကိုသတ်မှတ်ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူ disc ကိုထည့်သွင်း drive ကိုသို့ windose ဒါမှမဟုတ် USB က-connector ကိုတစ်ဦးက USB flash drive ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ , BIOS ကိုပိတ်ပြီးစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲ၏ parameters တွေကိုရန်ချိန်ညှိကယ်တင်စာနယ်ဇင်းမှနောက်တစ်ခု F10.
အဆိုပါကွန်ပျူတာ reboot နှင့်ဖြန့်ဖြူး installed windose ထားတဲ့အတွက် bootable မီဒီယာ, များထံမှပြီးသားစတင်ပါလိမ့်မည်။ သင်ဘာသာစကား, ကီးဘုတ် layout ကိုနှင့်အချိန် format ကိုရွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်နှင့်စာနယ်ဇင်းများအတွက်အကောင်းဆုံး parameters တွေကို Set "Next ကို".
လာမယ့် window ထဲတွင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Install".
ထို့နောက်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူပြတင်းပေါက်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာလည်ပတ်ရေးစနစ်၏နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ windose7delete ချင်လျှင်, သူတို့နှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရမလိုအပ်ပါဘူး။ ရုံစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားနှင့်စာနယ်ဇင်းသတ်မှတ်ထား "Next ကို".
အရေးယူဘို့နှစ်ခုအဆိုပြုထား options များ၏နောက် window ထဲတွင်ကို select "အပြီးအစီးတပ်ဆင်".
Next ကိုသင်ဖျက်ပစ်ချင်သော OS နဲ့ HDD partition တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါချင်ရှိရာခွံ, ဖွင့်လှစ်။ volume ၏နာမတော်ကိုလာမယ့် option ကိုဖွစျရမညျ "စနစ်" ကော်လံ "အမျိုးအစား"။ ယင်းကျောက်စာကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Disc Setup ကို".
က Settings window ထဲတွင်ထပ်တူညီတဲ့အပိုင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်တံဆိပ်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "Format ကို".
သတင်းအချက်အလက်ရွေးချယ်ထားသောအပိုင်းအပြီးအပိုင်ဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်ပါရှိသည်သောအချက်အလက်များ၏သမျှသောထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်ဘယ်မှာ dialog box ကို။ သငျသညျကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အရေးယူအတည်ပြုသင့်တယ် "အိုကေ".
ယင်းပုံစံချပေးဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပါ။ ရွေးချယ်ထား partition ကို၏အဆုံးပြီးနောက်လုံးဝ install လုပ်ထားတဲ့ operating system အပါအဝင်အချက်အလက်များ၏ရှင်းလင်းပါလိမ့်မည်။ Next ကို, သင်အလိုတော်မှာသစ်ကို operating system ကို install ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ, ဒါမှမဟုတ်တခြားသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသာဖယ်ရှား windose7ခဲ့လျှင်, installation ကိုမီဒီယာကနေဆုတ်ခွာ။
သင်ခန်းစာကို: windose7အတွက် drive ကိုစနစ်ကပုံစံချမှု
နည်းလမ်း 2: "System Configuration"
Vindovs7Remove ကဲ့သို့သော tools များကို အသုံးပြု. လည်း built စေခြင်းငှါ "System Configuration"။ သို့သော်ဤနည်းလမ်းသည်သင်၏ PC ကိုတစ်ခုထက် ပို. operating system ကိုရှိပါတယ်မှသာလျှင်သင့်လျော်ကြောင်းစိတ်တွင်သည်းခံကြ၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျကိုဖျက်ပစ်ချင်သောစနစ်, လက်ရှိတက်ကြွစွာမဖြစ်ရပါ။ သင့် PC ကိုအခြား operating system အောက်မှာထံမှထွက်ပြေးအောင်လုံးဝလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, မဟုတ်ရင်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။
ရိုက်သံ "Start" နှင့် go "Control Panel ထဲက".
အဆိုပါ utilities ၏နာမတော်အဘို့အစာရင်းကိုကြည့်ခုနှစ်တွင် "System Configuration" ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒီ tool ကိုလည်းပြတင်းပေါက်ကနိုင်ပါတယ် Run "Run ကို"။ နာရီမျက်နှာပြင် ဦးဝင်း + R ကို နှင့်ပွင့်လင်း box ထဲမှာ command ကိုရိုက်ထည့်:
တစ်ဦးက window ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် "System Configuration"။ အပိုင်းရွှေ့ရန် "Loading" သင့်လျော်သော tab ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။
ဒီကို PC ပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ operating systems များစာရင်းကိုနဲ့ window ကိုစတင်ပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုဖျက်ပစ်ချင်သော OS ကိုမီးမောင်းထိုးပြချင်, ပြီးတော့စီစဉ်တကိုနှိပ် "ကိုဖျက်", "Apply" နှင့် "အိုကေ"။ ဒါဟာသက်ဆိုင်ရာခလုတ်တက်ကြွမဟုတ်ပါဘူးကတည်းကသင်လက်ရှိကွန်ပျူတာနှင့်အလုပ်လုပ်နေကြရသောနှင့်အတူစနစ်, ဖြိုဖျက်ရမသတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဒါဟာစနစ်ပြန်လည်စတင်ရန်ပူဇော်မည်သည့်အတွက်တစ်ဦးကပေးတဲ့ dialog box ကို။ အားလုံးပွင့်လင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့် applications များပိတ်ပြီး, ကိုနှိပ်ပါ "ပြန်လည်စတင်ပါ".
အဆိုပါ PC ကို Restart လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ရွေးချယ်ထား operating system ကိုကနေဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။
windose7ဖယ်ရှားခြင်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့်နည်းလမ်းများစွာရွေးချယ်ရေးအဓိကအားသင့်ရဲ့ PC မှာ install လုပ်ပြီးမည်မျှ operating system များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ ပါလျှင်တစ်ဦးတည်းသာ operating system ကို, တပ်ဆင်ခြင်း, CD ကိုသုံးပြီးဖယ်ရှားပစ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်နည်းလျှင်, system ကို tools များ၏အသုံးပြုမှုကိုကပါဝင်ပတ်သက်ရသောဖယ်ရှားရန် option ကို ပို. ပင်လွယ်ကူသောလည်းမရှိ "System Configuration".